Line Walker2နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး - 9style
Home/အနုပညာရပ်ဝန်း/Line Walker2နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး
“Line Walker2လာရိုက်တာ ကြိုဆိုပါတယ် .ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ရိုက်တဲ့အတွက် ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကိုလည်း Line Walker2ကြည့်တဲ့သူတွေ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာသိသွားတာပေါ့ .
လမ်းတွေ ပိတ်ပေးတယ် . ရဟတ်ယှဉ် တွေနဲ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဆူးလေ ဘုရားရှေ့မှာ စင်းမယ် . မိုက်တာပေါ့ ပရိတ်သတ်အဖြစ်လည်း ရုံတင်ရင် ရှေ့ဆုံးက အားပေးမှာပါ ။
အဲ့လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထဲက သရုပ်ဆောင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ပေါကားတွေပဲ ရိုက်တဲ့လူရှိသလို သေချာရိုက်တဲ့ လူတွေအတွက် အဲ့လိုအခွင့်ရေးမျိုးရော မရသင့်ဘူးလားခင်များ .
လမ်းပိတ်ဖို့ မပြောနဲ့ .ကိုယ်ဟာကို Sky Star Hotel က ခွင့်ပေးလို့ . ရိုက်ခွင့်ရတဲ့ Original Gangster3တောင်ဆင်ဆာ မပေး အများပြည်သူ ပြသရန်မသင့် .
ဆူးလေဘုရားနား မြို့တော်ခန်းမရှေ့ လမ်းတွေ ပိတ် သေနတ်တွေပစ် အများပြည်သူပြသရန် သင့်ပါလား . သင့်ပါတယ် . . ဒါက အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာ . ဖျော်ဖြေရေးပါ .
အနုပညာ သမားဆိုတာလည်း ဘယ်ဟာ အထင်ကရလည်း အဲ့တစ်ခုခုနဲ့ကို ချိတ်ဆက်ဖန်တီးပြချင်တာလေ .
ကျွန်တော်တို့ OG ရုပ်ရှင်ကားက ဘာပညာပေးလည်းမေးရင် ဘာပညာမှမပေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ က ကျောင်းဆရာတွေ မဟုတ်ပါ .အနုပညာသမားတွေဆိုတော့ စိတ်အပန်ဖြေမူ့တော့ပေးနိုင်ပါတယ် .
အဲ့လို ရဟတ်ယှဉ်ဖိုး ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်ပါတယ် ၁နာရီ $4000 ရိုက်ဖို့လည်း အကုန်စုံစမ်းပြီးသားပါ . ဒါပေမယ့်
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘယ်နေရာကိုမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရဟတ်ယှဉ်ပြန်ခွင့်မရှိပါဘူး .
ကျွန်တော်တို့မှာ ရိုက်ပြီဆို အပီပြင်ဆုံး ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားရိုက်ပါတယ် .
မမြင်နိုင်တဲ့ တားဆီး များစွာရှိပါတယ် . အင်းစိန်ထောင် အပြင် . အထဲ . ဘယ်နေရာမှ လုံးဝပေးမရိုက်ပါဘူး
မပြီပြင်သောထောင် အတုကြီးကထွက်ကြပေါ့ ဆက်တင်နေရာ ရုပ်ရှင် Studio မရှိပါဘူး .တစ်ချို့ရပ်ကွက်မှာ ရိုက်ရင်တောင် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချူပ်ရေးမူးကြောက်ရ တခြားအများကြီးပေါ့ .
အခုလည်း မင်းတို့လို OG ပုံနဲ့ ယှဉ်တင်ရဲသေးတယ်နော်ဆိုပြီး ဆဲဖို့ Coment ရေးဖို့Keyboard ပေါ် လက်ရောက်နေသူများ ဆဲနိုင်ရေးနိုင်ပါတယ် . အခုကျွန်တော်တို့ကို ဆဲမယ့် ခင်များရော ခင်များပတ်ဝန်းကျင်ရော ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဖက်အဖက်က တန်းတူအခွင့်ရေးပေးခြင်းမခံရတဲ့ မြန်မာအချင်းချင်းတွေပါ .
ကျွန်တော်တို့တွေ နိုင်ငံခြားသွားကြည့်လိုက်လေ Passport အနီ ဆိုတာနဲ့ အနှိမ်ခံ နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အတူတူပါပဲဗျာ .အချင်းချင်း ဖေးမဖို့လိုအပ်ပါတယ် .
ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးတဲ့ကားများ လိုအပ်မှာပါ .
ရုပ်ရှင် သင်တန်းကျောင်း ပညာစနစ်တကျသင်ယူခွင့်မရပါဘူး။
တက်သလောက် လေ့လာသလောက်နဲ့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေပါ ။ ရူးသွပ်ထားတာများစွာ ရိုက်ပြီး အများပြည်သူ ပြသရန်မသင့်ဆိုတာနဲ့ပဲEdit ခန်းမှာ သိမ်းထားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းများစွာ .
ကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ ကားတွေ လိုအပ်တာရှိပါတယ် .ကြိုးစားဆဲလေဗျာ . ချက်ချင်းကြီးတော့ International ဆိုတဲ့လူတွေ နဲ့တိုင်းရင်တော့ သိမ်ငယ်တာပေါ့ .
ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရတာ သိန်း ၂၀၀၀ လောက်ပြန်ရတာလည်း အားမပေးရင် သိန်း ၂၀၀ . ၄၀၀ .အရမ်းအောင်မြင်ရင် ၅၀၀၀ ပေါ့ . တစ်နိုင်ငံလုံး ပြသခွင့်အများဆုံးရတဲ့ရုံ ၈၀ ထပ်မပိုပါဘူး . တပတ်ဆိုတာနဲ့ ရုံ ၅၀ကျော်လောက် Auto ပြခွင့်မရှိတော့ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့တွေလည်း အာစီယံ နိုင်ငံတွေ ရုံအနေနဲ့ အားလုံးပေါင်း ၄၀၀ . ၅၀၀ လောက်ပြခွင့်ရရင်တော့ထပ်ချဲ့လို့ရမှာပါ .
မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ပြန်နှိမ်ချင်တယ် . နိုင်ငံခြားအထင်ကြီးတယ် . အနှိမ်ခံရတဲ့ ဘဝ အတူအချင်းချင်းထပ်မထိုးနှပ်ကျပါနဲ့ဗျာ .
Passport အနီကိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာဖြစ်ရတာ အမြဲတန်းဂုဏ်ယူလျက် . . . . .
ဘယ်လောက်ခက်ခဲ ခက်ခဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှေ့ဆက် ရုန်းလျက် . . . မွေးလာတာ ကျွန်တော်တို့တွေ အနှိမ်ခံဖို့မဟုတ် သူများကိုအရူံးပေးဖို့မဟုတ် .သူကတော့ သူပေါ့ ငါကတော့ဘယ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုပြီးအမြဲ သိမ်ငယ်ဖို့မဟုတ် . . .
ကျွန်တော်တို့တွေ အစစအရာရာ နိုင်ငံရေး လူမူ့ရေး မစည်းလုံးနေသရွေ့ ဒီလိုအနှိ်မ်ခံ ဘဝက ရုန်းထွက်ရန်ခက်မည် . မင်းလည်း မြန်မာ ငါလည်းမြန်မာငါတို့တွေ စည်းလုံးဖို့လိုပြီ အားလုံး Peace . .
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ က ဆင်ဆာ လူကြီးမင်းများလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီတဲ့ ကားတွေလည်းရှိပါတယ် .ဆင်ဆာလူကြီးမင်းများကို ဆော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ.
မဖြစ်နိုင်တာတွေ မမှန်းပါဘူး . ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရရှိထားတဲ့ ငွေကြေး အခွင့်ရေးနဲ့ပဲ မရရအောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆက်လက်ဖန်တီးမည် ။”
ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထက်မှာ ယခုလို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်…….
Credit Yone Lay’s Facebook
“Line Walker2လာရိုကျတာ ကွိုဆိုပါတယျ .ကိုယျ့နိုငျငံမှာ ရိုကျတဲ့အတှကျ ဂုဏျလညျးယူပါတယျ.
ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံကိုလညျး Line Walker2ကွညျ့တဲ့သူတှေ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုတာသိသှားတာပေါ့ .
လမျးတှေ ပိတျပေးတယျ . ရဟတျယှဉျ တှနေဲ့ မွို့တျောခနျးမရှေ့ ဆူးလေ ဘုရားရှမှေ့ာ စငျးမယျ . မိုကျတာပေါ့ ပရိတျသတျအဖွဈလညျး ရုံတငျရငျ ရှဆေုံ့းက အားပေးမှာပါ ။
အဲ့လိုပဲ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံထဲက သရုပျဆောငျ ဘယျသူဖွဈဖွဈ ပေါကားတှပေဲ ရိုကျတဲ့လူရှိသလို သခြောရိုကျတဲ့ လူတှအေတှကျ အဲ့လိုအခှငျ့ရေးမြိုးရော မရသငျ့ဘူးလားခငျမြား .
လမျးပိတျဖို့ မပွောနဲ့ .ကိုယျဟာကို Sky Star Hotel က ခှငျ့ပေးလို့ . ရိုကျခှငျ့ရတဲ့ Original Gangster3တောငျဆငျဆာ မပေး အမြားပွညျသူ ပွသရနျမသငျ့ .
ဆူးလဘေုရားနား မွို့တျောခနျးမရှေ့ လမျးတှေ ပိတျ သနေတျတှပေဈ အမြားပွညျသူပွသရနျ သငျ့ပါလား . သငျ့ပါတယျ . . ဒါက အပွငျမှာ တကယျဖွဈတာမှ မဟုတျတာ . ဖြျောဖွရေေးပါ .
အနုပညာ သမားဆိုတာလညျး ဘယျဟာ အထငျကရလညျး အဲ့တဈခုခုနဲ့ကို ခြိတျဆကျဖနျတီးပွခငျြတာလေ .
ကြှနျတျောတို့ OG ရုပျရှငျကားက ဘာပညာပေးလညျးမေးရငျ ဘာပညာမှမပေးပါဘူး။ကြှနျတျောတို့ က ကြောငျးဆရာတှေ မဟုတျပါ .အနုပညာသမားတှဆေိုတော့ စိတျအပနျဖွမေူ့တော့ပေးနိုငျပါတယျ .
အဲ့လို ရဟတျယှဉျဖိုး ကြှနျတျောတို့လညျးတတျနိုငျပါတယျ ၁နာရီ $4000 ရိုကျဖို့လညျး အကုနျစုံစမျးပွီးသားပါ . ဒါပမေယျ့
ရနျကုနျမွို့တှငျး ဘယျနရောကိုမှ ဘယျသူ့ကိုမှ ရဟတျယှဉျပွနျခှငျ့မရှိပါဘူး .
ကြှနျတျောတို့မှာ ရိုကျပွီဆို အပီပွငျဆုံး ဖွဈအောငျတော့ ကွိုးစားရိုကျပါတယျ .
မမွငျနိုငျတဲ့ တားဆီး မြားစှာရှိပါတယျ . အငျးစိနျထောငျ အပွငျ . အထဲ . ဘယျနရောမှ လုံးဝပေးမရိုကျပါဘူး .
မပွီပွငျသောထောငျ အတုကွီးကထှကျကွပေါ့ ဆကျတငျနရော ရုပျရှငျ Studio မရှိပါဘူး .တဈခြို့ရပျကှကျမှာ ရိုကျရငျတောငျ ဘာမှမဟုတျတဲ့ ရပျကှကျအုပျခြူပျရေးမူးကွောကျရ တခွားအမြားကွီးပေါ့ .
အခုလညျး မငျးတို့လို OG ပုံနဲ့ ယှဉျတငျရဲသေးတယျနျောဆိုပွီး ဆဲဖို့ Coment ရေးဖို့Keyboard ပျေါ လကျရောကျနသေူမြား ဆဲနိုငျရေးနိုငျပါတယျ . အခုကြှနျတျောတို့ကို ဆဲမယျ့ ခငျမြားရော ခငျမြားပတျဝနျးကငျြရော ကြှနျတျောတို့ အားလုံး အဖကျအဖကျက တနျးတူအခှငျ့ရေးပေးခွငျးမခံရတဲ့ မွနျမာအခငျြးခငျြးတှပေါ .
ကြှနျတျောတို့တှေ နိုငျငံခွားသှားကွညျ့လိုကျလေ Passport အနီ ဆိုတာနဲ့ အနှိမျခံ နရေတဲ့ ကြှနျတျောတို့တှေ အတူတူပါပဲဗြာ .အခငျြးခငျြး ဖေးမဖို့လိုအပျပါတယျ .
ကြှနျတျောတို့ ဖနျတီးတဲ့ကားမြား လိုအပျမှာပါ .
ရုပျရှငျ သငျတနျးကြောငျး ပညာစနဈတကသြငျယူခှငျ့မရပါဘူး။ တကျသလောကျ လလေ့ာသလောကျနဲ့ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားနတေဲ့လူတှပေါ ။ ရူးသှပျထားတာမြားစှာ ရိုကျပွီး အမြားပွညျသူ ပွသရနျမသငျ့ဆိုတာနဲ့ပဲEdit ခနျးမှာ သိမျးထားတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးမြားစှာ .
ကြှနျတျောဖနျတီးတဲ့ ကားတှေ လိုအပျတာရှိပါတယျ .ကွိုးစားဆဲလဗြော . ခကျြခငျြးကွီးတော့ International ဆိုတဲ့လူတှေ နဲ့တိုငျးရငျတော့ သိမျငယျတာပေါ့ .
ကြှနျတျောတို့ရိုကျရတာ သိနျး ၂၀၀၀ လောကျပွနျရတာလညျး အားမပေးရငျ သိနျး ၂၀၀ . ၄၀၀ .အရမျးအောငျမွငျရငျ ၅၀၀၀ ပေါ့ . တဈနိုငျငံလုံး ပွသခှငျ့အမြားဆုံးရတဲ့ရုံ ၈၀ ထပျမပိုပါဘူး . တပတျဆိုတာနဲ့ ရုံ ၅၀ကြျောလောကျ Auto ပွခှငျ့မရှိတော့ပါဘူး
ကြှနျတျောတို့တှလေညျး အာစီယံ နိုငျငံတှေ ရုံအနနေဲ့ အားလုံးပေါငျး ၄၀၀ . ၅၀၀ လောကျပွခှငျ့ရရငျတော့ထပျခြဲ့လို့ရမှာပါ .
မွနျမာလူမြိုးတျောတျောမြားမြား ကိုယျ့လူမြိုးအခငျြးခငျြး ပွနျနှိမျခငျြတယျ . နိုငျငံခွားအထငျကွီးတယျ . အနှိမျခံရတဲ့ ဘဝ အတူအခငျြးခငျြးထပျမထိုးနှပျကပြါနဲ့ဗြာ .
Passport အနီကိုငျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား မွနျမာဖွဈရတာ အမွဲတနျးဂုဏျယူလကျြ . . . . .
ဘယျလောကျခကျခဲ ခကျခဲ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျရှဆေ့ကျ ရုနျးလကျြ . . . မှေးလာတာ ကြှနျတျောတို့တှေ အနှိမျခံဖို့မဟုတျ သူမြားကိုအရူံးပေးဖို့မဟုတျ .သူကတော့ သူပေါ့ ငါကတော့ဘယျလုပျနိုငျမလဲဆိုပွီးအမွဲ သိမျငယျဖို့မဟုတျ . . .
ကြှနျတျောတို့တှေ အစစအရာရာ နိုငျငံရေး လူမူ့ရေး မစညျးလုံးနသေရှေ့ ဒီလိုအနျှိမျခံ ဘဝက ရုနျးထှကျရနျခကျမညျ . မငျးလညျး မွနျမာ ငါလညျးမွနျမာငါတို့တှေ စညျးလုံးဖို့လိုပွီ အားလုံး Peace . .
ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံ က ဆငျဆာ လူကွီးမငျးမြားလညျး ကြှနျတျောတို့ကို ကူညီတဲ့ ကားတှလေညျးရှိပါတယျ .ဆငျဆာလူကွီးမငျးမြားကို ဆျောကားခွငျးမဟုတျပါ.
မဖွဈနိုငျတာတှေ မမှနျးပါဘူး . ဖွဈနိုငျတဲ့ ရရှိထားတဲ့ ငှကွေေး အခှငျ့ရေးနဲ့ပဲ မရရအောငျ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဆကျလကျဖနျတီးမညျ ။”
ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာထကျမှာ ယခုလို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရငျဖှငျ့လိုကျပါတယျ…….
သာယာလွန်းတဲ့ နေရာလေးမှာ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်တဲ့ အိချောပို
“အလကားပဲ” သီချင်းကို ချစ်ဇနီးလေးအရှေ့မှာ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုပြနေတဲ့ ပြေတီဦး
နန်းသူဇာနဲ့ မတန်ဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်နေသူတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ